'मेरो सालिग निर्माण नगर्नु' भन्ने पारसमणि प्रधानकै सालिग अनावरण भएपछि - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिन‘मेरो सालिग निर्माण नगर्नु’ भन्ने पारसमणि प्रधानकै सालिग अनावरण भएपछि
August 12, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन, विचार 0
भरतमणि बोल्दै गए, भने, “सालिग स्थापित गरिएपछि त टाउकामा काग बस्छ, चरा-चुरुङ्गी बस्छन् अनि बिष्ट्याउँछन् पनि। त्यो अजालाई मन पर्दैन थियो। सालिग अनावरणपछि त्यसको बिल्लिबाठ हुन्छ। त्यसको कसैले सिहार-सुसार गर्दैनन्। त्यो उनलाई मन पर्दैन थियो। त्यसैले उनले आफ्नो सालिग निर्माण नगर्नु भनेका थिए।”
रोशन दाहाल, कालेबुङ ।
डा. पारसमणि प्रधानले त आफ्नो सालिग निर्माण नै नगर्नु भनेका थिए। उनले त्यो लेखेरै छोडेका छन्। तर पनि उनको सालिग निर्माण गरियो, स्थापित गरियो अनि भारतमा खोलाचन्द फाप्री सिलगढी पछि अहिले कालेबुङमा पनि सालिग अनावरण गरियो। त्यो देखेर डा. पारसमणि प्रधानका परिवारपक्ष भने हर्षले बुरूक-बुरूक थिए।
ग्रीन सिटी मिसन अन्तर्गत कालेबुङ नगरपालिका (भारत)-ले कालेबुङका विभिन्न ठाउँमा पार्क निर्माण गर्दैछ। त्यही क्रममा कालेबुङ चेस्ट क्लिनिक परिसरमा खाली रहेको नगरपालिकाको जमीनमा पनि नगरपालिकाले पार्क निर्माण गऱ्यो। अन्य पार्कमा घाम ताप्ने चौकी जोड्ने, शितल ताप्ने कुटीका साथ बाघ, भालु आदिको मुर्ति स्थापित गर्ने नगरपालिकाले यो पार्कमा भने नेपालीका वरिष्ठ साहित्यकार तथा व्याकरणविद् डा. पारसमणि प्रधानको सालिग विशेष रूपले स्थापित गऱ्यो। पार्कलाई पारसमणि उद्यानको नाम दिइयो।
मुर्तिकार अमिर सुन्दासले तयार पारेका साहित्यकार प्रधानको मुर्ति वरिष्ठ साहित्यकार डा. पारसमणि प्रधानको स्मरण स्वरूप स्थापित गरिएको भनी कालेबुङ नगराध्यक्ष रवि प्रधानले त बताए। तर सालिग अनावरण कार्यक्रममा डा. पारसमणि प्रधानका परिवारपक्षबाटै जेठा नाती भरतमणि प्रधानले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा भने, “अजाले त मेरो सालिग नबनाउनु भनेर त लेखेरै छाड्नु भएको छ।”
कार्यक्रममा उपस्थित मानिसहरू हेरेका हेरेकै भए।
वास्तवमा सालिग स्थापित गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन तर त्यसको देख-रेख, सह्यार-सुसार गर्नु पनि पर्छ भनी डा. पारसमणि प्रधानले भन्न खोजेका थिएछन्। अनावरण कार्यक्रममा नाती भरतमणि प्रधानले अनि त्यही भन्न खोजेका थिए। उनलाई त्यसकै सुर्ता छ।
हुन पनि धेरै ठाउँ स्वतन्त्र सङ्ग्रामी, जातीय सङ्ग्रामीहरूका मुर्तिको हालत सबैले देखेकै हो। साहित्य सङ्ग्रामीको पनि त्यही बेहाल हुन के बेर। राम्रो भयो, भरतमणिले अनावरण कार्यक्रममै सबैलाई सजग गराए। तर…..
जे होस्, डा. प्रधानको सालिग स्थापित गरेर कालेबुङ नगरपालिकाको वर्तमान बोर्डले उल्लेखनीय कार्य गरेको ठानियो। सबैले नगरपालिका बोर्डको वाह-वाही नै गरे। सहित्यकार डा. पारसमणिका परिवारपक्ष पनि हर्षले बुरूक-बुरूक नै रहेको पाइयो। सालिग स्थापित गर्ने जिम्मेवारी त नगरपालिकाले लियो, पूरा गऱ्यो पनि। तर ‘मेरो सालिग निर्माण नगर्नु’ भन्ने पारसमणिकै सालिग अनावरण भइ सकेपछी अब त्यसको देख-रेखको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? अब त्यसको संरक्षण कुन पक्षबाट हुन्छ? त्यो सुर्ताको विषय बनेको छ। कसैको पनि सालिगको बिल्लिबाठ भएको राम्रो होइन्। बिल्लीबाठ हुन्छ नै पक्कै भन्ने डा. प्रधानलाई लागेको थिएछ। उनले सायद नै त्यस्ता धेरै उदाहरण देखेको हुनुपर्छ पक्कै पनि। र त सालिग निर्माण नगर्नु भने।
अब डा. पारसमणि प्रधानको सालिग चाँही बिल्लीबाठ हुनु भएन। कालेबुङमा गहना थपिदिएको छ नगरपालिकाले। अब त्यसको सिहार-सुसारको जिम्मेवारी सबैको बन्छ। विशेष फेरि नगरपालिका कै पनि। डा. प्रधानकै स्वरूप स्थापित गरिएको सालिगको सही कदर गरिनुपऱ्यो। सबै पक्षबाट। तब साहित्यकारको सहि मूल्याङ्कन होला।